Mogadishu Journal » Xan ayaa leh: Neymar ayaa lala xiriirinaya ku soo laabashada Barcelona.
Xiddiga Paris Saint-Germain Neymar ayaa lagu soo waramayaa inuu bartilmaameed u yahay Barcelona markale.
Neymar ayaa markale lala xiriirinayaa inuu ku laabanayo Barcelona.
Weeraryahanka reer Brazil ayaa ka tagay kooxda ka dhisan LaLiga isagoo ku biiray Paris Saint-Germain heshiis rikoorka adduunka ah oo 222 milyan ginni ah sanadkii 2017.
Laakiin wararka xanta ah ee ku laabashada Camp Nou ayaa diidan inay baxaan.
NEYMAR OO LAla XIRIIRAY SOO CELINTA BARCELONA
Neymar ayaa la xiriiray musharixiinta madaxtinimada kala duwan ee Barcelona si uu ugu laabto kooxda isagoo ka yimid PSG, sida laga soo xigtay Sport.
Waxay leedahay Neymar, oo dhawaan la sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu cusbooneysiiyo heshiiska PSG ee dhacaya 2022, ma doonayo inuu kordhiyo kooxda heysata horyaalka Ligue 1.
Neymar ayaa la dagaallamayay dhaawacyo tan iyo markii uu u dhaqaaqay caasimada Faransiiska, isagoo saftay 30 ama wax ka yar mid kasta oo ka mid ah seddexdii xilli ciyaareed ee uu joogay kooxda isagoo ku sii jeeda 2020-21.
- Joogitaanka Barcelona iyo Mundo Deportivo ayaa warinaya in xiddiga kooxda Lyon Memphis Depay uu heshiis afar sano ah la leeyahay Catalans. Waxay imaaneysaa maalmo kadib markii madaxweynaha Lyon Jean-Michel Aulas uu meesha ka saaray bixitaanka Janaayo ee weeraryahanka. Depay ayaa qandaraaskiisu dhacayaa dhamaadka xilli ciyaareedka, Mundo Deportivo ayaana sheegay inuu u dhaqaaqi karo bisha Janaayo 5 milyan ama 6 milyan ginni.
- Dominik Szoboszlai wuxuu u diray Hungary Euro 2020 khamiistii, xiddigga Salzburg waxaa laga doonayaa Yurub oo dhan. Wargayska AS ayaa sheegaya in ay kooxda Real Madrid raaceyso xiddiga khadka dhexe oo ay sheegtay in lagu qiimeeyo lacag dhan 25 milyan oo euro sidoo kale ay doonayaan kooxaha Arsenal, Milan iyo RB Leipzig.
- Sidoo kale Real Madrid iyo AS ayaa warinaya Martin Odegaard inuu door muhiim ah ka ciyaari karo inuu ka caawiyo kooxda heysata horyaalka LaLiga inay la soo wareegaan saaxiibkiisa reer Norway Erling Haaland oo ka socda Borussia Dortmund sannadka 2022.
Kadib markii uu Chelsea u ciyaaray kaliya 33 daqiiqo oo Premier League ah, Olivier Giroud ayaa markale lala xiriirinayaa inuu u dhaqaaqayo. CalcioMercato ayaa ku warameysa in Inter ay dooneyso inay dib ugu laabato weeraryahankeeda bisha Janaayo.
- Iyadoo ay kujiraan dhibaatadooda dhanka daafaca iyadoo Virgil van Dijk iyo Joe Gomez ay wajahayaan waqti dheer garoomada, Liverpool ayay u badan tahay inay raadiso daafac dhexe bisha Janaayo. TeamTalk ayaa ku warameysa in kooxda heysata horyaalka Premier League loo soo bandhigay daaficii hore ee Newcastle United iyo Watford Daryl Janmaat.